Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 30 uLwezi 2016 » SciBraai
Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 30 uLwezi 2016
Sibusiso Biyela / November 30, 2016
Isimanga amantombazane akha isathelaythi
Ukwakha isathelaythi ezothunyelwa emkhathini lapho khona izothumela imilayezo ebalulekile phansi emhlabeni kuthatha ubuchwepheshe obumangalisayo. Yize kunjalo, iqembu lamantombazane esikole anesathelaythi ezotshuza iye emkhathini ngonyaka ozayo.
Amantombazane lawa asuka ezikoleni ezahlukene ezweni lonke, aqeqeshwe ososayensi nonjiniyela abasebenza ngokwezomkhathi namasathelaythi. Izinga lokuqeqesheka kwabo selibenze bakwazi nokuzakhela isathelaythi yabo bezenzela bona kusukela isacatshangwa ize iphele ukwakhiwa.
Uma isisemkhathini, isathelaythi le izokwazi ukuzungeza umhlaba lapho izobe ithumela imilayezo ebalulekile ezokwazi ukutshela ososayensi ngesimo sezulu njengokubhula izimo ezifana nesimiso nokuguquka kwemozulu. Uma isitshuzile yaya emkhathini, le kuzoba isathelaythi yokuqala eyakhiwe inkampani ezimele e-Afrikha, kanti futhi itshengisa ubuchwepheshe obenziwa amantombazane e-Afrikha.
Ucwaningo lomgomo we-HIV luyaqala e-Ningizimu Afrikha
Amazwe aseNingizimu yezwekazi i-Afrika abhekene nesimo sesandulela-ngculazi esidlula umhlaba wonke. Ilesi isizathu esenze ososayensi ukuba beqale ucwaningo oluzobheka ukusebenza komgomo ozovikela abantu kwisifo se-HIV.
Njengayo yonke imgomo yezifo okubalelwa kuyo umkhuhlane kanye notwayi, kumele umgomo omusha we-HIV ucwaningwe kabanzi ngaphambi kokuba ukhiqizwe usetshenziswe ibo bonke abawudingayo. Ilenhlobo yocwaningo ezokwenziwa ezweni iNingizimu Afrika lapho khona kuzovivinywa abantu abangu-5400.
Ucwaningo lolu luzobheka ukuthi umgomo usebenza kangakanani. Ucwaningo olufanayo olwenzeke ezweni lase Thailand lutshengise ukusebenza ngezinga elingu-30% kodwa ososayensi bathemba ukuthi emva kweminyaka emithathu lizosebenza lifike ezingeni lokuvikela elingu-50% kuya phezulu.
November 30, 2016 in #ShisaSayensi. Tags: AIDS 2016, AIDS DAY, AIDS Day 2016, HIV AIDS, HIV/AIDS, HIV/AIDS in South Africa, satellite, science, south Africa, zulu, Zulu science
← The science of what Doom bug spray does to humans
Weighty matter: metabolic syndrome on the rise among SA’s Asian Indian population →